3d Printa olulingana, Petg kwayo, ABS Plastic intambo - Lanbo
Olulingana Printer 3d Black (Orange)
Olulingana Printer 3d Black (Pink)
Olulingana Printer 3d Black (Purple)
Olulingana Printer 3d Black (Red)
Olulingana Printer 3d Black (White)
3d Printer olulingana (etyheli Flourescent)
3d Printer olulingana (Orange)
3d Printer olulingana (Pink)
3d Printer olulingana (Purple abomvu)
3d Printer olulingana (Red)
Cixi izinto yoshicilelo lanbo Co., Ltd.was elasekwa 2011and ise- CIXI, Ningbo, Zhejiang,
besonwabela ukufikelela zokuhamba lula kwaye elihle bume.
Inkampani yethu igubungela ummandla kweemitha 2000square kwaye iqeshe abasebenzi 100.
Ingaba 3D izinto eziprintiweyo umphefumlo? Thatha wena...
Abantu abaninzi ingqalelo 3D yoshicilelo, kuqala kwiinto zonke, ukuba babethanda izinto ezincinane ezintle eprintiweyo yi 3D. Ngaphezu koko, abanye abahlobo ozakukhathala yokusebenza imifuziselo ezahlukeneyo abashicileli 3D, kunye nezinto 3D yoshicilelo ziye babesilela kwiimeko ezininzi. Enyanisweni, 3D phepha engaba ...
Yazi into Pla of 3D eprintiweyo mater ...
abathengi kunye nabahlobo abaninzi undibuze ukuba Pla yiplastiki? Nantsi intetho rough malunga oko Pla namhlanje. Pla ke basisishunqulelo IsiNgesi of polylactic acid, esibhaliweyo ngolu hlobo: polylacticacid. Polylactic acid (Pla) kuyinto inoveli biobased ezi- izinto ezenziwe wesitatshi izinto ecetywayo ...
Ingaba kukho naluphi na ukhuseleko kwi 3D eziprintiweyo o ...
3D technology yoshicilelo isekelwe imodeli lwedijithali, usebenzisa izinto bondable ezifana metal olungumgubo okanye iplastiki ukuprinta isakhiwo umaleko into ngu umaleko. Le ubuchwepheshe izicelo kwicandelo izacholo, izihlangu, uyilo mveliso, ulwakhiwo, ezobunjineli kunye nokwakha, ...